ikhaya » I-Archives Tag: MStar
Archives Tag: MStar
I-Signiant yandisa Ubukho bayo e-Asia kunye neNtsha Partner, Systems Ideal
I-Signiant Inc, inkokeli yemakethi ekutshintshisweni kweefayili ehlakaniphile, namhlanje izisa ukuba iyakwandisa ubukho bayo e-Asia ngokusebenzisana ne-Ideal Systems, enye yeemimandla ezikhokelela ekusasazeni, ezibonwayo zomsindo kunye nabaxhasi benkqubo yeendaba. IiNkqubo eziPhambili ziza kuhlaziya kwaye zixhase iphothifoliyo ye-Signiant yezisombululo ezihamba phambili kwezoshishino kummandla. Iinkampani zokuqala eziphuma kunye ziya kuba kwi-BroadcastAsia2018, Suntec Singapore, ...
U-Aimée Ricca Ukwaziswa ngokuKhupha iZenzo zokuThengiswa kweMigca yokuCwangcisa kwi-SMPTE!
I-Society of Motion Pictures and Engineers (SMPTE) iye yazuza kwiinkqubo zokuthengisa ngokukhawuleza nezenzo, okwandise ukufakwa kwamaphephandaba ngokubanzi ngaphezu kwe-1,200% kwindawo yokuthengisa. U-Aimée Ricca ukhokelela ukuthengisa kunye nokunxibelelana kwe-SMPTE (isikhungo sefilimu kunye nokusasazwa kwehlabathi ukususela kwi-1916), kwaye uye waba nguvulindlela wokuzama ukuthengisa. Ngokuba ...
I-Apantac ivula i-KVM ngaphezu kwe-IP kunye ne-KVM ye-UHD Solutions kwi-InfoComm 2018
U-Apantac, umvelisi oqaphele ngamazwe kunye noovulindlela bokusebenza ngeendleko ezibonakalayo kodwa eziphathekayo ezizizityebi ezininzi, iindonga zevidiyo, ukwandiswa kunye nezicwangciso zendlela yokucwangcisa impawu zandisa i-KVM umgca weemveliso kunye nezisombululo, eziza kubonisa kwi-InfoComm 2018, idokodo le-N546 ezayo. I-KVM ngaphezu kwe-IP Extender / Receiver Sets I-KVM entsha kwi-IP extender / receiver set (Umzekelo: KVM-IP-Tx / Rx) ilungele izicelo apho iikhomputha ezininzi zendawo ...
Umkhiqizo okhanyayo: ATTO ThunderLink SH 3128 NgokuThumela ngoku!
I-ATTO ThunderLink SH 3128 ngoku i-shipping kwaye le thunderbolt ene-3 enamandla kwi-12Gg SAS / SATA i-adapter iya kunika abasebenzisi ngokukhawuleza nokuxhomekeka kokugcinwa kokugcinwa kwexesha elide kunye nokudluliselwa kwedatha ephezulu. Eli qela linika uxhumano lwe-12Gb / s lwe-SAS / SATA kuwo onke ama40Gb / s I-Thunderbolt 3 (i-2-port). Uvivinywa kwiimeko ezixakeke kakhulu ezifana nezokuzonwabisa kunye nokuzonwabisa ...
I-Soliton kunye neCanon iqabane lokunikela ngeSolution-Broad Compact H.265 Live Mobile Broadcasting Solution
Umhlanganisi weeNkqubo uPalma Technology isebenza kunye namaqabane uSolonon Systems kunye neCanon ukubonelela ngezisombululo ezintsha zokusasaza eziphilayo ezidibanisa i-Soldio ze-Zo-S H.265 zekhowudi zekhompyutha kunye neenkalo zeekhamera zeCanon ezibugcisa e-US naseLatin America. I-Soliton Zao-S yiyona encinci yehlabathi yeH265 hardware encoder eyenza i-HD ethembekileyo yevidiyo iqhutywe kwi-3G / 4G / Wifi amanethiwekhi. I-Zao-S isetyenziswe ngu ...
IABM iyazisa imodeli entsha yoshishino - I-BaM Content Chain: ukusuka kuMdali ukuya kuMthengi
Iimodeli ezintsha zeemephu zeenkomfa zokubonelela ngeenkcukacha kwiinkqubo zobunjineli, ezobugcisa kunye nezobugcisa ze-IABM, iqumrhu lohwebo lwamazwe ngamazwe abanikezeli bobugcisa bokusasazwa kunye neendaba, bhengeze kule iveki ukuba liqalise imodeli emitsha yoshishino - I-BaM ™ Content Chain: ukusuka kuMdali ukuya kuBathengi . Yenzelwe ukulolonga isakhiwo esitsha soshishino lo sasazo kunye nesevisi kunye nokubonelela ...
I-Excelero ixhasa iFilimu kunye neMigangatho yokuveliswa kweTV ye-TV, phezulu nangaphandle kwe4K
Ukusetyenziswa kwamaphayona kusetyenziso lwe-SAN software ye-NVMesh ye-Excelero ukuvumela ukulungiswa, ukugqiba kunye ne-VFX ukufezekisa ukusebenza kakuhle, ukuqhubekisa iindleko kunye nokuqinisekiswa kwangaphambili kwisiseko "Naliphi-K" Isitoreji SAN JOSE, Calif., Ngo-Ephreli 4, 2018 - Njengemidiya kunye nokuzonwabisa Amafemu athatha iifom ze-4K kunye ne-60fps ireyithi eziphezulu zoluhlu, kunye nomxholo wokuqulunqa ophezulu njenge-8K kunye ne-16K ifomathi ekugqibeleni, i-Excelero yamemezela ukuba inceda ifilimu kunye ne-TVkwane ...
Ikhamera ye-Panavision ye-Millennium DXL2 yenza i-NAB Debut
I-Panavision, umbonisi wezithombe ezihamba phambili ohlonishwayo, umenzi kunye nomboneleli we-state-of-art-cinema lens, iinkqubo zekhamera ezichanekileyo eziphezulu kunye nobugcisa bokuvelisa i-post, ziza kubonakalisa ikhamera ye-Millennium DXL2 8K kwi-National Association of Broadcasters (NAB ) Bonisa, eqhuba ngo-Apreli 7-12 eLas Vegas. Iinkokeli zeTeknoloji ezivela ePanavision kunye neNkxaso yayo yeNkcenkcesho yeNsimbi iya kubelana ngemibono yabo kunye ...